Maqaallada ku saabsan Afgaanistaan
Sida loo helo shaqo Afgaanistaan ​​dhexdeeda
November 18, 2020 Shubham Sharma Afghanistan, shaqo
Shisheeyaha, Afgaanistaan ​​waxay leedahay dhammaan noocyada fursadaha shaqo ee bixiya si aan caadi aheyn. Qabashadu waa taas, haa, Afghanistan, waa inaad shaqeysaa. Sababtoo ah mushaharka dhibaatada wanaagsan, waxaa jira shakhsiyaad badan oo doonaya
October 30, 2020 Antika Kumari Afghanistan, fiisada
Muwaadiniinta Hindiya waa inay fiiso ku baxaan si ay ugu safraan Afghanistan dalxiis ahaan. Dalku wuu u furan yahay inuu ku safro talobixinta safarka ee COVID. Muddo 30 maalmood ah, joogitaanku badanaa wuu gaaban yahay, fiisaduna waxay ku egtahay 90 maalmood. Goorma
U hel Visa Afgaanistaan!
April 23, 2020 Shubham Sharma Afghanistan, fiisada
Afghanistan ayaa ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan ee fiisaha la helo. Safaarado badan ayaa bixiya fiiso dalxiis iyagoo wata foomka dalabka oo dhameystiran, sawirka nooca baasaboorka, fiisada fiisada, iyo daabacaadda baasaboorkaaga. Aad bay u sameeyaan isla maalintaas.
Wax ka barta Jaamacadaha Afghanistan
April 22, 2020 Antika Kumari Afghanistan, waxbarasho
Waxaad ubaahantahay inaad barato midkastoo jaamacadaheeda kugu habboon adiga haddii aad rabto inaad wax ku barato Afghanistan. Haddii ay dhacdo, waxaad dooneysaa inaad wax ku barato jaamacadaha ku yaal Afghanistan. Kadib, go'aan muhiim ah ayaa ah in la doorto halka wax lagu baranayo. Waan helnay
Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Afghanistan.
April 20, 2020 Antika Kumari Afghanistan, caafimaadka
Sanado dagaal sokeeye ayaa burburiyey nidaamka daryeelka caafimaadka iyo si ka duwan wadamada kale, cuduro ay ka mid yihiin shuban biyoodka iyo caabuqyada neef mareenka ayaa ku soo kordhay Afghanistan. Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, qiyaas ahaan tobankiiba hal carruurta ayaa dhinta ka hor inta aysan gaarin
Waqtiga ugufiican ee Aadista Afghanistan Halkan Ogow!
April 2, 2020 Karuna Chandna Afghanistan, safarka
Afgaanistaan ​​waa ummad ay xilliyadoodu afar yihiin. Maalmaha xagaaga waxay u adeegaan dabaylaha boodhka. halka lagu keydiyo kaararka roobku xirmay waa qaboobaha. Caadi ahaan, waqtiga ugu habboon ee Afgaanistaan ​​loo tago waa Abriil-Meey iyo Sebtember-Oktoobar. Waqtiga ugu roobka badan yahay wuxuu ka socdaa
Ma waxaad tahay shakhsiyad xad-dhaaf ah? Hadday haa tahay, ka dukaamee meelahan Afqanistaan ​​!!
February 4, 2020 Karuna Chandna Afghanistan, wax in la sameeyo
Afgaanistaan ​​waxay soo-booqde u soo bandhigtaa xulasho qani ku ah farsamada gacanta. Roogagga Afgaanistaan ​​ee raaxada leh, jaakadaha karakul, jaakadaha dhogorta leh, waxyaabaha la isku tolay, koofiyadaha iyo dharka xarka leh ee gacanta lagu tolay ayaa aad caan u ah. Waxyaabaha qadiimiga ahi waa qaar ka mid ah walxaha duufsada safarka. Midhaha Afghanistan iyo lowska
Socdaal ku taga Afghanisthan? Waa inay booqdaan meelahaas !! Meelaha ugu sarreeya ee aad ka heli karto Afganisthan !!
February 3, 2020 Maitri Jha Afghanistan, wax in la sameeyo
Warshadaha dalxiiska ee Afghanistan waxaa lagu horumariyey iyadoo gacan ka heleysa dowlada horaantii 1970-yadii si tartiib tartiib ah ayey dib ugu soo noolaaneysaa tobanaan sano oo dagaal ah. Baasaboor ansax ah oo leh fiiso ayaa looga baahan yahay gelitaanka Afghanistan. Safaaradaha Afghanistan waxay soo saaraan inta udhaxeysa 15,000 iyo